EC2 Instance Type Pricing အကြောင်း - Leet Developers
Home Blog AWS EC2 Instance Type Pricing အကြောင်း
By: System Administrator On: Nov 19, 2019 AWS 61
၁. All Upfront- ကိုယ်က တနှစ် (သို့) သုံးနှစ်စာအတွက် ကျသင့်ငွေကို တခါထဲ ပေးချေခြင်း။(၁ လချင်းပေးရတဲ့ငွေ သက်သာသွားပါတယ်၊ နှစ်များရင်ပိုသက်သာပါတယ်)။ တလုံးတခဲကြီးတော့ပေးလိုက်ရတာပေ့ါနော်။
၂. Partial Upfront - ဒီကောင်ကတော့ တ၀က်ကို အရင်ပေးချေတာဗျ။ Discount ရတဲ့နှုန်းကတော့ All Upfront ထက်နည်းသွားတာပေါ့။ တ၀က်တော့ ချက်ချင်းတန်းပေးလိုက်ရတာပေ့ါ နောက်မှ ကျန်တာကို တလခြင်းခွဲပေးရပါတယ်။
၃. No Upfront - ဒီကောင်ကတော့ တန်းပြီးအကုန်လည်း မပေးရသလို တ၀က်လည်းပေးစရာမလိုပါဘူး % Discount ရတဲ့ နှုန်းကိုပဲ တလချင်းပေးရပါတယ်။ % Discount ရတဲ့နှုန်းတော့ အနည်းဆုံးဖြစ်ပေမယ့် ပုံမှန် On Demand Instance ထက်တော့ စျေးသက်သာစေပါတယ်။ အနည်းဆုံး တစ်နှစ်တော့ ချုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
၁. Standard - On demand pricing ထက် 75% သက်သာပါတယ် ။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ Instance Attributes တွေကို ပြောင်းလဲလို့တော့မရပါဘူး။စဖွင့်ကတည်းက အတိုင်းပဲ ဆက်သုံးနေရမှာပါ။
၂. Convertible - On demand pricing ထက် 54 % သက်သာစေပါတယ်။သူ ကတော့ Reserved instance တွေရဲ့ Attributes တွေကို ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်(တိုးလို့ရပါတယ် အရင်အတိုင်း ညီနေလို့ရပါတယ် ရှိနေတာထက်တော့ လျော့လို့ မရပါဘူး)
၃. Scheduled - သူကတော့ Specific ဖြစ်တဲ့ time နဲ့သတ်မှတ်ပြီး ဝယ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်( ဥပမာ- တပတ်ကို ဘယ်နှနာရီပဲ ဒီ instance ကိုသုံးမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။) စျေးအတော်သက်သာစေပါတယ်